Madaxa Uber oo iska casilay xil uu Trump u hayay - BBC Somali
Image caption Travis Kalanick, madaxa shirkadda adeegga tagaasida ee Uber
Travis Kalanick, oo ah madaxa shirkadda adeegga tagaasida ee Uber, ayaa iska casilay xil uu ka hayay kooxda madaxweyne Trump kala talisa arrimaha dhaqaalaha, ka dib markii si weyn loo dhaliilay.
Uber ayaa ka mid ah dhowr shirkadood oo ka walaacsan saamaynta ay xanibada uu Trump saaray muhaajiriinta ku yeelan karto shaqaalahooda.
Shirkadaasi ayaa sheegtay in ay 3 milyan oo dollar ay u asteysay sidii ay dhanka sharciga uga caawin lahayd shaqaalaheeda uu saameeyay amarka Trump, kuwaasoo u badan darawaliinta Uber.
Mr Kalanick oo u muuqday in uu ka xunyahay qaabka ay warbaahinta uga hadashay ka mid ahaanshihiisa kooxda Trump la talisa, ayaa sheegay in asaga iyo Uber toona aanay waafaqsaneyn ujeedooyinka maamulka cusub.
Todobaadkii lasoo dhaafay, xilli ay tagaasida kale wadeen shaqa joojin lagu diidan yahay amarka Trump ee qaxootiga iyo Muslimiinta ku aaddan, ayaa Uber waxa ay dhintay qiimaha gawaarideeda lagu raaco.
Tallaabadaasi ayaa dhalisay in baraha bulshada laga billaabo olole loogu magac daray "#DeleteUber" oo micnihiisu yahay tirtir barnaamijka telefoonnada ku shaqeeya ee Uber lagula xiriiro.
Balse Uber ayaa sheegtay in ujeedkeedu ahaa in ay dibed baxayaasha u sahasho sidii ay qiimo jaban ku gaari lahaayeen goobaha ay mudaharaadyada ka socdaan, gaar ahaan garoomada diyaaradaha.